SketchPAN: Ataovy Sary Ny Tontolo Tsy Miteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2018 7:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, عربي, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 30 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ahoana ny fomba hanehoanao hevitra antserasera? Amin'ny teny ve sa amin'ny sary, sa lahatsary sa sary hosodoko? Tsy nihevitra ny fanaovana sary antserasera ny sasany amintsika , kanefa azo atao izany ankehitriny, miaraka amin'ny SketchPAN. Nanomboka tamin'ny volana Febroary 2008 ity tranonkala iray ity, izay tamin'ny teny koreana no niandohany. Misy ny dika amin'ny teny Anglisy nanomboka ny volana Aogositra, ary mahasarika ireo mpisera any Etazonia, Japana, Shina, Vietnam, Brezila ary firenena maro hafa izany. Tsy sakana intsony ny fiteny ato amin'ity “tontolo tsy miteny ” ity .Tsy mamorona, maneho hevitra na mifandray amin'ny hafa fotsiny ihany amin'ny alàlan'ny fanaovana sary ireo mpisera manerana izao tontolo izao fa afaka mianatra manao sary miaraka amin'ny bokotra «raketo» ihany koa izy ireo. Afaka niresaka tamin'i Bora Lee izahay, tompon'andraikitry ny Paikadin'ny Haivarotra ao amin'ny SketchPAN .
Inona no atao hoe SketchPAN?
Ny SketchPAN, dia manome sehatra sy fitaovana tsotra ahafahan'ireo mpisera mamorona votoaty maro sy miavaka manokana izay tsy mitovy amin'ny lahatsoratra, na sary na lahatsary.
Manampy ny mpisera handefa fisainana lavidavitra kokoa ny fitaovana ampiasainay amin'ny fanaovana sary, ny sarimiaina ary ny sary iombonana. Tsy ho ela dia hahalala ireo lalao an-tsary marobe vaovao ny mpisera.
Ankoatra izany, ahafahan'ny olona manerana izao tontolo izao mizara sy mifandray amin'ny alalan'ny famoronana sary manokana ny tranonkalanay amin'ny alalan'ity tambajotra sosialy ity.
Inona no antony nanosika ny hanomboka ny SketchPAN?
Raha nahita ny asakanto tsara tarehy nataon'ireo mpianatra manan-talenta izay lasa tetikasa tsotra ho an'ny sekoly i Yu Kim, Tale Jeneraly sady mpanorina ny SketchPAN, dia nahatakatra ny zavatra izay mety ho tsapan'izy ireo . Namorona sehatra iray izy mba hanampiana azy ireo haneho ny famoronany an-kalalahana amin'ny Aterineto , ary hizara ireo asakanto ireo miaraka amin'ny namany manerana izao tontolo izao.
Inona avy ireo fampiasa omen'ity tolotra ity?
SketchPAN – midika hoe takelaka amin'ny koreana ny hoe “pan”- dia manome ireto tolotra manaraka ireto: DrawingPAN, AnimationPAN, TogetherPAN ary ShopPAN. Ny DrawingPAN dia mandrakitra sy mamerina ny famolavolana ny sary. Ny AnimationPAN dia ahafahan'ny mpisera mamorona mora foana ny karazana sarimiaina folioscope. Ny TogetherPAN dia ahafahana [manao] asakanto iombonana. Ny ShopPAN dia manome sary vonona ho ampiasaina. Ary farany, ny MyPAN dia pejy manokana izay ahafahan'ny mpisera manangona ny sanganasan'ny namany sy ireo fanehoan-kevitra momba ny sary.
Fanehoana avy amin'i DrawingPAN
Nisy fanamarihana tsy nampoizina ve avy tamin'ireo mpisera?
cible initiale pour ce service était les artistes ou les gens s'intéressant à l'art ; cependant, lors de nos tests, nous avons vu des enfants et des parents montrer un énorme intérêt pour notre service. Même maintenant, une grande partie des utilisateurs de SketchPAN sont des enfants, qui créent continuellement beaucoup de contenus uniques et amusants.
Ireo mpanakanto na ireo olona liana amin'ny zavakanto no tena nokendrena tamin'ny voalohany tao anatin'ity tolotra ity; Na izany aza, nahita ankizy sy ray aman-dreny nampiseho ny fahalianana goavana tamin'ny tolotra nomenay izahay nandritra ny fanandramana nataonay. Na dia amin'izao fotoana izao aza, dia ny ankizy no betsaka amin'ny mpisera ao amin'ny SketchPAN, izay mamorona tsy mitsahatra ny votoaty miavaka sy mahafinaritra.
Efa nisy hatramin'izay ny fitaovam-pamoronana. Hahazo tombony amin'ny SketchPAN ireo mpampianatra, ankizy, ray aman-dreny, mpianatra ary mpisera maro ary mbola misokatra ny lisitra. Raiso ary ny ‘totozy‘-nao: ary atombohy androany ny lesona manokana voalohany hianaranao manao sary antserasera.